लिलामणि पोख्रेल भन्छन् : एमसीसी पास भए नेपालको हालत इरानको जस्तै बन्न सक्छ - Himali Patrika
लिलामणि पोख्रेल भन्छन् : एमसीसी पास भए नेपालको हालत इरानको जस्तै बन्न सक्छ
हिमाली पत्रिका २३ पुष २०७६, 5:11 am
राजनीतिक संक्रमण अझै सकिएको छैन। संविधानको कार्यान्वयन र पार्टी एकताको मुलभूत काम सकिएको छ। तर, कतिपय महत्वपूर्ण विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ। शान्ति प्रक्रिया र द्धन्दकालीन घटनाका सबै विषय टुंगिइसकेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो संघर्ष पनि संक्रणकालीन राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा तय हुन्छ।
हरेक कुराको विकास र विनासको प्रधान कारण आन्तरिक हुन्छ, यो द्धन्दवाद हो। बाहिरी कुरा त प्रेरक तत्व मात्र हो। नेकपाको भविष्य पनि हाम्रै आन्तरिक संगठन, पार्टी जीवन, पार्टीले लिने निर्णय र सरकारले चाल्ने कदममा निर्भर हुन्छ। हामीले कस्तो पार्टी बनाउँछौं ? त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भनेका छौं। तर, व्यवहारमा दलाल पूँजीवादको अभ्यास गर्न थाल्यौं भने हाम्रो भविष्य जोखिममा हुन्छ। हामीले अभ्यास पनि समाजवादकै गर्नुपर्छ।
एमसीसी नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधान एकदमै घातक छ। एमसीसी सम्झौतासँग बाझिएका कानूनहरु निस्क्रिय हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य के हो ? सम्झौतामा कसैले पनि आफ्नो रणनीति लेख्दैनन्, त्यो पर्दापछाडि हुन्छ। एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यस्ता धेरै प्रावधान राखिएका छन्, जसका बारेमा सबै कुरा प्रष्ट छैन। त्यो पनि हाम्रा लागि अर्को घातक कुरा हो।
मेरो व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति अनुराग छैन। पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरा बला त्कार प्रयासको अभियोगमा जेलमा छन्। तर, एउटा जोगीले मलाई ब लात्कार गर्यो भनेर महिलाले गुहार माग्छिन्। अनि, त्यही व्यक्ति धरौटीमा छुट्छ। यो कस्तो न्याय हो, कस्तो प्रणाली हो ? बला त्कार गर्ने धरौटीमा छुट्ने, बला त्कारको अभियोग लाग्ने चाहिँ जेल जाने ? यसका पछाडि पनि षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ।